Izindaba - Isimiso esisebenzayo se-valve yebhola kagesi
I-valve yebhola kagesi inesenzo sokujikeleza ama-degree angama-90. Umzimba weqhude uyindilinga enesiyingi ngembobo noma isiteshi esidlula eksisi yaso. I-valve yebhola isetshenziswa kakhulu kupayipi njenge-valve yebhola kagesi ukusika, ukusabalalisa nokuguqula ukugeleza kokuhamba kwaphakathi. Idinga kuphela ukuzungeza ama-degree angama-90 ne-torque encane ukuvala ngokuqinile. I-valve yebhola ilungele kakhulu ukusetshenziswa njenge switch kanye ne-valve yokuvala. Ukuthuthuka kuklanyelwe i-valve yebhola ukuphamba nokulawula ukugeleza, njenge-valve yebhola eyenziwe ngo-V. Izici eziyinhloko ze-valve yebhola kagesi ukwakheka kwayo okuhlanganisiwe, ukubekwa uphawu okuthembekile, isakhiwo esilula nokunakekelwa okulula. Ubuso bokubekwa uphawu nobuso obuyindilinga kuvame ukuba sesimweni esivaliwe, okungekho lula ukususwa yilo maphakathi. Kulula ukusebenza nokugcina. Ifanele amanzi, izincibilikisi, ama-asidi kanye negesi yemvelo. Isikhungo esisebenzayo sisebenzelana nendawo enezimo zokusebenza ezinzima, njenge-oxygen, i-hydrogen peroxide, i-methane ne-ethylene, njll., Ezisetshenziswa kakhulu ezimbonini ezahlukahlukene. Umzimba we-valve yebhola ungahlanganiswa noma uhlanganiswe.
I-valve yebhola kagesi iyinhlanganisela ye-plug-type ball valve kanye ne-actuator kagesi. Isakhiwo somzimba webhola le-valve yisipuni esizungeza ama-degree angama-90. I-actuator kagesi ifaka isignali ejwayelekile ye-0-10 mA. Iqembu lezimoto lishayela igiya kanye ne-worm gear angle torque. Lungisa i-valve nebhokisi lokushintsha. Ukusetshenziswa kwayo kukhiqizwa kakhulu yimisebenzi yamanje neyokulungisa.
Ama-actuator kagesi asetshenziswa kakhulu afaka ama-multi-turn, i-single-turn, ama-actuator asebenza ngama-quarter-turn, ama-actuator kagesi asebenza ngokulingana, ama-actuator wokuqhuma, kanye nama-actuator amancane. Amavalvu ebhola ikakhulukazi afaka ama-valve ebhola elintantayo, ama-valves ebhola elingaguquki, ama-valve amise okwe-O, ama-valve webhola amise okwe-V, nama-valve endlela amathathu. Ukukhishwa kanye nokulungiswa kwe-valve yebhola ndawonye kungaveza imikhiqizo ehlukahlukene. Ungangeza futhi ibhokisi lokulawula ukusebenza kude, bese ufaka ezinye izesekeli ku-actuator ukufeza izinhlelo zokusebenza ezithe xaxa, njengokufaka indawo yokuma kagesi ukulungisa ukugeleza, futhi ukumelana / ukuguqula isikhundla samanje se-valve kungasetshenziswa ukulawula ama-valve. Inkomba nokulawulwa kokuvulwa kwesikhundla, indlela yesondo yesandla ingasetshenziswa ngesandla uma ingekho yamanje, nezinye izesekeli ezisetshenziswa kakhulu zifaka imikhono yokuvikela, ukushintshwa kokuhamba kokuqinisekisa ukuqhuma, njll. Ukukhethwa kokuqala kungakhethwa ngokuya ngezimo zokusebenza .
Ama-akhawunti wama-valve kagesi manje asetshenziswe kabanzi ku-oyela, igesi yemvelo, imithi, ukudla, amandla kagesi, amandla enuzi, ugesi, ukuhlinzekwa kwamanzi kanye namapayipi, ukufudumeza, ukusansimbi nezinye izimboni, futhi kuyimikhiqizo ebalulekile yemishini yokwakhiwa kwezokuvikela ezweni. Futhi ngumkhiqizo obalulekile ekwakhiweni kwezobuchwepheshe. Inesabelo esiningi semakethe, ikakhulukazi ngenxa yezizathu ezahlukahlukene njengokusebenza okuqinile, usayizi omncane, ukusebenza okuthembekile, umthamo omkhulu wokujikeleza, abantu abakhanyayo nabashibhile, kanye nokulawula okukude kwamavalvu ebhola kagesi. Ama-valve ebhola kagesi awagxili nje kuphela, ayavala, ayanqunywa, njll. Umkhiqizo omuhle wokuvulwa nokuphambukiswa, noma umkhiqizo onolaka wokuzikhethela ohlelweni lokulawulwa kokugeleza. It has izici eziningi ezifana ingcindezi ukumelana, lokushisa ukumelana, ukugqwala ukumelana, ongaphakeme ukugeleza ukumelana, ukuphila isikhathi eside, futhi ububanzi isicelo ububanzi.
Isikhathi Iposi: Jun-12-2021